I-Autoimmune Arthritis | Ukuxilongwa, Izimpawu nokwelashwa
Isifo samathambo se-Autoimmune
24 / 06 / 2020 /i rheumatism /av olimalayo
Igayidi enhle ye-Autoimmune Arthritis
Kuyini i-autoimmune arthritis? Kulesi sihloko ungafunda kabanzi ngalolu hlobo lwe-arthritis - lapho amasosha omzimba ahlasela khona amalunga.
I-autoimmune arthritis yigama leqembu lokuxilongwa okuhlukile lapho amasosha omzimba uqobo ezihlasela wona - kanye namalunga awo. Isibonelo esidume kakhulu kithi baseNorway isifo samathambo. Lapho amasosha omzimba ehlasela amalunga omzimba uqobo, ukuvela kokuvuvukala kuyokwenzeka. Lokhu kuvuvukala nakho kungadala ubuhlungu bamalunga, ukuqina nobunzima bokuhamba. Kunezinhlobo ezingaphezu kwe-100 ezahlukahlukene ze-arthritis - zazo ukuxilongwa okuhlukile kungadala izimpawu ezahlukahlukene. I-Psoriatic arthritis ne-rheumatoid arthritis yizibonelo ezimbili ezivame kakhulu zesifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba.
Kulesi sihloko sifundisa okuningi mayelana ne-autoimmune arthritis. Phakathi kokunye, esizodlula kukho:
Izinhlobo Ezihlukahlukene ze-Autoimmune Arthritis
Izimpawu ze-Autoimmune Arthritis
Izici Zobungozi Zokuthuthukisa I-Autoimmune Arthritis
Ukwelashwa kwe-Autoimmune Arthritis
Iziphakamiso zokuzivocavoca nokuzivocavoca ku-Autoimmune Arthritis (kufaka phakathi i-VIDEO)
Izinkinga zesikhathi eside
Izinhlobo ezihlukile ze-Autoimmune Arthritis
Lapha sidlula ezinye zezindlela ezivame kakhulu ze-autoimmune arthritis.
Isifo samathambo: Uhlobo oluvame kakhulu lwesifo esihlangene se-autoimmune. Ukuxilongwa ngokujwayelekile kubangela ukuvuvukala nobuhlungu ezandleni, izandla nezinyawo, kanye namadolo njengoba isimo sesiya ngokuba sibi. Ucwaningo selukhombisile ukuthi kuze kube yi-75% ethintwa yilesi simo abesifazane.
Isifo samathambo: I-Psoriasis yaziwa kakhulu ngesimo sesikhumba, isikhumba esinikeza ukubukeka kwesilayidi okuso kanye nokushiswa kwaso. Amanani aphakathi kwama-20- 40% alabo abanalesi sifo sesikhumba anaso futhi isifo esihlanganyele esaziwa ngokuthi yi-psoriatic arthritis. Lokhu kokugcina kungathinta amalunga cishe kuwo wonke umzimba, kufaka phakathi umgogodla, amadolo, iminwe, izinzwane, okhalweni namahlombe.
Isifo Somthambo: I-arthritis esebenzayo ivela kuphela kubantu abanomlando wezifo ezithile zebhaktheriya - njengeSalmonella, iCampylobacter neChlamydia. Lokhu kuxilongwa kungenza, ngaphezu kobuhlungu obuhlangene, kubangele amehlo abomvu, ubuhlungu lapho uchama kanye / noma ukuqubuka ngaphansi kwezinyawo noma ezintendeni zezandla.
I-Axial Spondyloarthritis ne-Ankylosing Spondylitis: Nikeza i-arthritis yomgogodla uqobo, ohlangana kancane kancane, obangele nobuhlungu nokuqina emalungeni.
I-Juvenile Arthritis (Juvenile Idiopathic Arthritis): Njengoba igama lisho, le ndlela yamathambo ithinta izingane nentsha. Ukuxilongwa kunganikeza izimpawu ezijwayelekile ezinjengobuhlungu obuhlangene, ukuvuvukala kwamehlo, umkhuhlane kanye nokuqhuma.
Isifo samathambo sePalindrome: Uhlobo olungavamile lwesifo samathambo olunikeza iziqephu noma ukuqhuma kwe-arthritis ebese ihamba yodwa. Ukuxilongwa kaningi kuthinta iminwe, izihlakala namadolo. Izimpawu zakudala zifaka izinhlungu, ukuvuvukala, ukuqina kanye nomkhuhlane.
Ukuxilongwa ngakunye kokushiwo ngenhla esikubalule ngenhla kungabubangela bobabili ubuhlungu nokuvuvukala kwamalunga.
Izimpawu zesifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba zizohluka ngokuya ngesifo esithile samathambo. Kepha lapha sidlula ezimpawu ezijwayelekile - ezibandakanya okulandelayo:
Isibonelo sezimpawu ezithile i-enthesitis. Lokhu kuwuphawu oluvame ukuba khona e-psoriatic arthritis, okusho ukuthi kunezindawo ezinomfutho lapho ama-ligaments kanye nama-tendon anamathele khona emathanjeni. Lokhu kungahle, ngokwesibonelo, kufakwe ku-tendon ye-Achilles ngemuva kwesithende noma emuva kwe-elbow (in triceps).
Izici ezinobungozi zesifo samathambo esizimele sincike ohlotsheni lwe-arthritis umuntu athinteke kulo. Kodwa-ke, kunezici ezandisa ingozi yokuthuthukisa i-autoimmune arthritis - njenge-genetics nomlando womndeni nge-rheumatism.
Abaningi futhi babonile ukuthi i-epigenetics ingadlala indima enkulu. Phakathi kokunye, kuhlonziwe izici ezilandelayo zengozi:
Ukuchayeka kuqala kubuthi (isib. Intuthu kagwayi lapho useyingane)
Abesifazane cishe bacishe babe kathathu ingozi yokuba nesifo samathambo. Ngakolunye uhlangothi, amadoda asengozini enkulu yokuthola i-ankylosing spondylitis.
Udokotela we-rheumatologist, okusho uchwepheshe wezokwelapha ku-rheumatology, uphenya isifo samathambo i-autoimmune. Ukuhlolwa kwe-rheumatological kuqala kuzobuza ngezimpawu zayo, kufaka phakathi ukuthi yini okwenza izimpawu zibe ngcono futhi zibe ngcono. Ungabuye ubuzwe ngomlando wokugula kwezokwelapha. Ngemuva kwalokho kuzokwenziwa izivivinyo ezingeziwe ukuthola kabanzi ngempilo yomuntu kanye nokuhlangana kwamajoyina athintekile.
Lezi zivivinyo zokuxilonga zingafaka:
Ukulinganisa i-Diagnostics (ukuhlolwa kwe-X-ray, i-CT noma i-MRI ukuhlola impilo ehlangene)
Ukuhlolwa kwegazi (kufaka phakathi ukuhlola i-rheumatic factor, ama-antibodies athile kanye nokwehliswa)
I-Tissue biopsy (ingasetshenziselwa i-psoriasis ukuqinisekisa ukuxilongwa)
Lapha kubalulekile ukusho ukuthi akukho sivivinyo esisodwa esingakhomba isifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba. Le nqubo ifaka phakathi uhlobo lokukhishwa - lapho kancane kancane umuntu ethola ukuxilongwa ngamathuba aphezulu kakhulu. Inqubo yokuhlola enjalo ezimeni eziningi ingathatha isikhathi eside.
Udokotela wakho uzobheka izinto ezimbalwa ngaphambi kokusetha uhlelo lokwelashwa kwezidakamizwa lwe-arthritis yamasosha omzimba. Isikhukhukazi sizohlola izimpawu zakho, uhlobo lwesifo samathambo onaso nempilo ejwayelekile - ngaphambi kokunquma ukuthi iyiphi indlela engcono yokwenza. Ukwelashwa kwezidakamizwa cishe njalo kuhlanganiswa nokwelashwa ngokomzimba nokuqeqeshwa komphumela omuhle.
Labo abanezinhlobo ezinciphile zesifo samathambo i-autoimmune bangaba nomphumela omuhle wokuthatha i-NSAIDS kuphela. Njengo-Ibuprofen.
Abanye kufanele bashintshele emithini esindayo, kadokotela ebizwa nge-DMARDS - njenge-methodextrate. Uma i-DMARDS ingasebenzi, kungakuhle ukuthi uzame lokho okwaziwa ngokuthi umuthi wezinto eziphilayo. Lokhu kuvimbela uhlelo lokuxhumana lomzimba. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi womabili ama-DMARD nemithi yemvelo kungukuzivikela komzimba (kunciphisa ukuzivikela kwamasosha omzimba, futhi kwenze umuntu obathathe asheshe angenwe yizifo nokuvuvukala).
Okunye Ukwelashwa Nokuzivocavoca
Njengoba kushiwo ngaphambili, umuntu angathanda ukuhlanganisa ukwelashwa kwezidakamizwa nokwelashwa ngokomzimba - bese futhi nokuguqulwa kokudla. Lokhu kungafaka:
Ukudla okulwa nokuvuvukala
Iseluleko Sokwelashwa Nokuqeqeshwa Kwabasebenzi Abagunyaziwe bezempilo abanesazi ku-Muscle and Skeleton (Physiotherapist, Chiropractor or Manual Therapist).
Umsindo wokucindezela (isib lawa magilavu ​​okucindezela)
Ukuzivocavoca echibini lamanzi ashisayo
Indlela ebanzi ekwelashweni kwe-autoimmune arthritis kubalulekile ukwenza imiphumela emihle kakhulu. Kulesi sihloko wakhe Ungafunda kabanzi ngokudla okulwa nokuvuvukala. Ukuvivinya umzimba njalo kubalulekile ukukhuthaza ukusebenza kahle nokugeleza kwegazi. Ividiyo engezansi ikhombisa isibonelo sohlelo lokuzivocavoca olwenzelwe ukulwa ne-osteoarthritis ezandleni zakho:
I-VIDEO: Ukuzivocavoca Oku-7 Ngokulwa Ne-Hand Osteoarthritis
Joyina umndeni wethu! Bhalisela mahhala esiteshini sakho se-YouTube (chofoza lapha) ukuthola izinhlelo zokuzivocavoca mahhala namavidiyo wezempilo.
Kunconywe ukuzisiza kwe-Arthritis
kokucindezela Noise (Ezifana kokucindezelwa amasokisi anomthelela omkhulu ngo kwegazi ukuze imisipha obukhulu noma amagilavu ​​wokucindezela aguqulelwe ngokukhethekile og amasokisi ngokumelene nezimpawu ze-rheumatic ezandleni nasezinyaweni)
Chofoza esithombeni ukuze ufunde kabanzi ngamagilavu ​​wokuminyanisa.
Abadonsa uzwane (izinhlobo eziningana ze-rheumatism zingadala izinzwane ezigoqiwe - ngokwesibonelo izinzwane zesando noma i-hallux valgus (uzwane olukhulu olugobile) - izipikili zezinzwane zingasiza ukukhulula lezi)
Amateyipu amancane (abaningi abane-rheumatic and chronic pain banomuzwa wokuthi kulula ukuziqeqesha ngama-elastics wangokwezifiso)
Trigger iphuzu Amabhola (ukuzisiza ukusebenza kwemisipha nsuku zonke)
Ukhilimu we-Arnica noma isixhobo sokushisa (abantu abaningi babika ukuphumula kobuhlungu uma besebenzisa, ngokwesibonelo, ukhilimu we-arnica noma i-heat conditioner)
- Abantu abaningi basebenzisa ukhilimu we-arnica ngezinhlungu ngenxa yamajoyinti aqinile nemisipha ebuhlungu. Chofoza esithombeni ngenhla ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi kanjani umabhebhana kungasiza ukukhulula ezinye zezimo zakho zobuhlungu.
Imiphumela yesikhathi eside yesifo samathambo ye-autoimmune incike kokuhlukahluka umuntu ahlushwa nakho. Isibonelo esihle kakhulu isifo samathambo esingahle sidale ukungaphatheki kahle ezandleni nasezinyaweni. Phakathi kokunye, uJahn Teigen wesithandwa sethu wayehlushwa isifo samathambo, futhi lezi zinguquko ezihlangene zihambe kahle kakhulu kunalezi azenza nsuku zonke. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi labo abanesifo samathambo basengozini enkulu yokuthinteka yisifo senhliziyo nesifo sikashukela (1). Ezimweni ezingavamile, ukulimala okuhlangene kungaba nzima kangangokuthi kudinga ukuhlinzwa - njengokufaka idolo noma i-hip esikhundleni.
Umuntu onesifo sokuqaqamba kwamalunga omzimba uhamba ngezikhathi ezibuhlungu nokuvuvukala. Lokhu kungenza kube nzima ukusebenza noma ukuhlangana nabantu ngendlela efanayo njengakuqala. Ukugwema izinkinga, kubalulekile ukuthola ukuxilongwa nokuhlolwa kusenesikhathi - ukuze umuntu athole ukwelashwa okuphelele nokwelashwa komzimba.
Ukuxilongwa Kwasekuqaleni kubalulekile
Ukwelashwa kufanele kube Okuphelele futhi Okujwayelekile (Imithi, Ukwelashwa Komzimba, Ukuzivocavoca, Ukuzivocavoca Ukudla Nokudla
Ukusetshenziswa njalo kwe umsindo kokucindezelwa ingaba wusizo ekugcineni ukujikeleza kwegazi.
Izinkinga Zesikhathi Eside Zingaya Ngaphesheya Ukwaneliseka Kokusebenza kanye Nokusebenza Kwansuku Zonke
Imibuzo? Zizwe ukhululekile ukuyithumela kusigaba sokuphawula ngezansi. Ngaphandle kwalokho, sincoma ukuthi ujoyine iqembu lethu lokusekela: I-Rheumatism kanye ne-Chronic Pain - INorway: Ucwaningo Nezindaba. Lapha uzothola imininingwane ewusizo futhi ungabheka database yethu enkulu yemibuzo edlule. Siyethemba ukukubona lapho.
Uthandile i-athikili yethu? Shiya isilinganiso senkanyezi
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/autoimmun-artritt.jpg 368 700 olimalayo https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png olimalayo2020-06-24 11:42:322021-03-24 10:51:34Isifo samathambo se-Autoimmune
Isifo samathambo Konke Okufanele Ukwazi Nge-Sacroilitis [Umhlahlandlela Omkhulu]